कक्षा ६ विज्ञान प्रकाश ( Light) पाठका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
Contact: (977) 9819267790
प्रकाश ( Light)
1) प्रकाशको स्रोत भनेको के हो?
=> प्रकाश दिने वस्तुलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। जस्तै: सूर्य, विद्युत, बत्ती आदि।
2) सूर्यलाई प्रकाशको प्रमुख स्रोत भनिन्छ, किन?
=> पृथ्वीको लागि सूर्यले जति प्रकाश वा उज्यालो दिने अरु कुनै स्रोत छैन। त्यसैले सूर्यलाई प्रकाशको प्रमुख स्रोत भनिन्छ।
3) बिजुली नपुगेको ठाँउमा प्रकाशको लागि कुन कुन स्रोत प्रयोग हुन्छ?
=> बिजुली नपुगेको ठाँउमा प्रकाशको लागि सोलार बत्ती, मैन बत्ती, टुकी, लालटिन आदि स्रोत प्रयोग हुन्छ।
4) दिप्त वस्तु भनेको के हो? कुनै5उदाहरण दिनुहोस्।
=> आफ्नै प्रकाश भएका वस्तुलाई दिप्त वस्तु भनिन्छ। जस्तै: i) सूर्य ii) बिजुली बत्ती iii) आगो iv) तारा v) जुनकिरी।
5) अदिप्त वस्तु भनेको के हो? कुनै5उदाहरण दिनुहोस्।
=> आफ्नै प्रकाश नभएका वस्तुलाई अदिप्त वस्तु भनिन्छ। जस्तै: i) ऐना ii) चन्द्रमा iii) किताब iv) ढुङ्गा v) माटो।
6) ऐना र चन्द्रमा दिप्त वस्तु होइनन्, किन?
=> ऐनाले घाममा परेको अवस्थामा मात्र सूर्यको प्रकाश परावर्तन गरेर प्रकाश दिन्छ, अन्य अवस्थामा दिंदैन। चन्द्रमाले पनि यसमा परेको सूर्यको प्रकाश मात्र पृथ्वी तिर परावर्तन गर्छ। आफ्नै प्रकाश भएको वस्तु मात्र दिप्त वस्तु हुन्। ऐना र चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन। त्यसैले ऐना र चन्द्रमा दिप्त वस्तु होइनन्। यिनिहरु प्रकाशका परावर्तक (Reflector of Light) मात्र हुन्।
7) अदिप्त वस्तु कति प्रकारका छन्, ति के के हुन्?
=> अदिप्त वस्तु3प्रकारका छन् । ति हुन्:-
i) पारदर्शक वस्तु
ii) अर्धपारदर्शक वस्तु
iii) अपारदर्शक वस्तु।
8) पारदर्शक वस्तु भनेको के हो?
=> सजिलैसँग प्रकाश छिर्ने वस्तुलाई पारदर्शक वस्तु भनिन्छ। जस्तै: हावा, पानी, काँच, सफा प्लास्टिक आदि।
9) अर्धपारदर्शक वस्तु भनेको के हो?
=> आंशिक रुपले प्रकाश छिर्ने वस्तुलाई अर्धपारदर्शक वस्तु भनिन्छ। जस्तै: बुट्टा भएको काँच, तेल लागेको सेतो कागज, ट्रेसिङ पेपर आदि।
10) अपारदर्शक वस्तु भनेको के हो?
=> प्रकाश विल्कुलै नछिर्ने वस्तुलाई अपारदर्शक वस्तु भनिन्छ। जस्तै: काठ, ढुङ्गा, माटो आदि।
11) “प्रकाश सधैं सिधा बाटोमा मात्र प्रसारण हुन्छ। “भन्ने कुरा उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट पार्नुहोस्।
=> टेवलमा मैन बत्ती बालेर राख्ने। क्रमशः सोझो र बाङ्गो पोलिथिन पाइपको टुक्राले मैन बत्ती हेर्ने। सोझो पाइपबाट हेर्दा मैन बत्ती बलेको देखिन्छ तर बाङ्गो पाइपबाट हेर्दा मैन बत्ती देखिँदैन। यसबाट प्रकाश सधैं सिधा बाटोमा मात्र प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।
12) पिनहोल क्यामराले कुन सिद्धान्तका आधारमा काम गर्छ?
=> प्रकाश सधैं सिधा प्रसारण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पिनहोल क्यामराले काम गर्छ।
13) पिनहोल क्यामरामा आकृति कसरी बन्छ?
=> वस्तुको टुप्पाबाट गएको प्रकाशको किरण क्यामराको पिन होलबाट प्रवेश गर्दा सिधा जाने भएकोले पर्दाको तल्लो भागमा पर्दछ। त्यस्तै वस्तुको तल्लो भागबाट आउने प्रकाश पिन होलबाट सिधा जाँदा पर्दाको माथिल्लो भागमा पर्दछ । त्यसैगरी वस्तुको अन्य भागबाट आउने प्रकाश पनि पिन होलबाट सिधा प्रवेश गरी पर्दामा पर्छ। यसरी पिन होल क्यामरामा वस्तुको आकृति बन्छ।
जलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल
ShivaDeep Skill Education
ShivaDeep Skill Education isaprivate company focused on promoting modern learning resources in Nepal.
Class -10 Science
Class -10 Math
Class -10 Computer
Address: Gulmi & Kathmandu
Mobile: (977) 9819267790
Copyright 2019 - ShivaDeep Skill Education. All rights reserved.